Agaasinka Guud ee TCDD wuxuu ku dhawaaqay inay shaqaalaysiin doonto shaqaalaha iyada oo lagu dhawaaqo. Ogeysiinta shaqaaleynta shaqaalaha iyo tafaasiisha lagu daabacay DPB waxay ku jiraan wararkayaga. TCDD QOFKA KHUDBADA OGOLAANSHAHA Ogaysiiska Guud ee TCDD, Madaxa Shaqaalaha Dawlada [More ...]
Agaasinka guud ee TCDD wuxuu soo saaray ogeysiis si uu u bixiyo macluumaadka ku saabsan ballamaha dhexe ee 2019 / 1 KPSS iyo habraaca ay u fulinayaan shaqaalaha loo xilsaaray hay'adda. OSYM Madaxtooyada 2019 / 1 KPSS natiijooyinka doorbidida meelaynta udub dhexaadka ah [More ...]
Maalgashiyo cusub oo kordhin doona tartankii Dekadda Mersin oo bixin doona awood dheeri ah oo ah markabka weelasha 2 mega ayaa sii socota. In kasta oo ay maamusho Agaasinka Guud ee TCDD, 11 2007 sano ee May 36 [More ...]